En vente actuellement 26/11/2018
Miha-fotsy, miha-tanora kokoa ny endrika… maska vovo-dronono atao !
Ny asidra manokana ao anatin'ny ronono, na ilay antsoina hoe "acide lactique" dia tena manatsara ny hodi-tava. Manazava endrika izany singa izany, manadio ary manala ireo sela maty koa. Tsy vitan'izay fa manamandina hoditra ny "acide lactique" ary manatsara kalitao azy. Mihafotsy sady mihamandina ny tarehy koloina amin'ny ronono. Ireo hoditra makiana sy maina ary ara-dalàna no tena mahazo tombontsoa betsaka aminy.
Vaksiny miady amin’ny fahatapahan’ny lalan-drà : Ho avy tsy ho ela…
Mifototra amin’ny fihinanana fanafody “anti-coagulants” izay misoroka ny fitambangainan’ny rà ny fitsaboana ny fahatapahan’ny lalan-drà. Amin’izao fotoana, dia eo am-pikarohana vaksiny afaka manolo an’io fitsaboana io sy hanatsaràna ny fitsaboana ny marary, ireo manam-pahaizana ao Osaka Japana.
Béyoncé, Emma Stone… : fifaninanan-kira no niandohany
Betsaka ireo olo-malaza niezaka nitady lalana mba hahatrarana ny tanjony. Misy amin’izy ireo no nanomboka avy hatrany tany anatin’ireny fifaninana madinika ireny saingy efa tonga malaza indrindra eran-tany, amin’izao fotoana.
Azo ampatoriana ao an-trano ve ny olon-tian’ny zanaka ?
Mifanakaiky am-po kokoa amin-janany ny ray aman-dreny ankehitriny. Miray tsikombakomba mihitsy aza, amin’ny zavatra sasany,
Mini quiche amin’ny trondro sy fraomazy
Akora ilaina Ho an’ny paty · Lafarinina 250g · Dibera 150g · Tamenak’atody 2 efa nokapohina kely · Paprika ½ sk
1. Robe à guipure120.000Ar – Boutique « Love Story » Tana Water Front Ambodivona
2. Robe fluide à carreaux 70.000Ar - Boutique « Love Story » Tana Water Front Ambodivona 3. Robe maxi à bretelle 60.000Ar – Magasin New Century Soarano box 07 1er étage
« #MerciProf » : Fomba iray ankasitrahana ireo mpampianatra
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nalaza tao amin’ny tambazotran-tserasera ny “#Pasdevague”, izay nanehoan’ireo mpampianatra tany Frantsa ny tsy fahazakan’izy ireo ny herisetra mianjady aminy.
Ankizikely 10 taona, nidaroka ny mpampianatra azy
Notorian’ny mpampianatra azy ity ankizikely 10 taona, mpianany ao amina sekoly iray ao Villejuif, Frantsa.
Vehivavy namono sy nahandro ny sakaizany
Novonoin'ny vehivavy maraokanina iray ny sakaizany, nandrahoiny ary narosony ho sakafon’ny mpiasa Pakistaney miasa any Emirat Arabes Unis avy eo, araka ny tatitra nataon’ny gazety The National.
Te ho afa-po amin’ny bikanao ve ianao ? araho ireto …
Tsy misy tonga lafatra ny olona tsirairay avy ka mila manaiky sy mitia izay hananany ny tsirairay. Ny tsy fahafaham-po amin’ny vatana izay hananana dia olana atrehan’ny vehivavy maro. Manimba saina anefa izany ka tokony hialana. Ireto torohevitra ireto dia manampy amin’izany.
Vehivavy aho ary mbola mianatra.
Misy lehilahy izay any, tiako izy, efa roa taona izay, nefa ny fisiako aza mety tsy fantany akory .
Mihena 60 kilao noho ny fampiasana ny tambajotram-pifandraisana
Misy akony amin’ny fiainan’ny mpampiasa azy, ny tambajotram-pifandraisana. Tsy voatery ho ratsy foana anefa izany fa mety hitondra izay mahasoa ihany koa.